I-Gamepron: AmaHacks amahle kakhulu angatholakali & aphambe nge-Aimbot
AmaHack Game Angatholakali
Umholi Wemakethe Ekuphambeni Kwemidlalo Engatholakali.
Imidlalo engama-40 +, ama-Game Hacks ayi-100 + nokubala. I-Gamepron ukuphela kwendlela yezidingo zakho zokukopela.
Buka wonke ama-HacksVakashela Isitolo Sethu
Zizwa ukuvikelwa okungenakuhlulwa ngokukhetha ukugenca ngezinkohliso ezisezingeni eliphakeme ezitholakala lapha eGamepron. Ama-akhawunti akho ngeke abe sengozini lapho usebenzisa enye yezinketho zethu ze-hack ne-ESP, njengoba sisebenzise inqubo ekhethekile yokuvikela ukukopela kukho konke ukukhishwa kwethu!
Amanani we-hacks ethu azohluka ngokuya ngesikhathi ongathanda ukusisebenzisa, futhi abanye abantu bazothi size sikhokhise inani le- “premium”. Amathuluzi esiwakhiphela umphakathi angaphezulu kolayini, futhi amanani entengo ayabiza kakhulu.
Ukungaguquguquki kuma-hacks owasebenzisayo kuzokuvumela ukuthi uwine imidlalo eminingi ngaphandle kwesihloko osidlalayo, yingakho i-Gamepron inikela ngokuqinile ngezici ezisebenzayo (njenge-Aimbot, i-ESP, iWall Hack, neNoRecoil) kuyo yonke into eyodwa amathuluzi esiwadedelayo. Njengegama elithi, amathuluzi wethu azokusiza ku-Gamepron kuphela!
I-Hacks yazo ZONKE Izihloko Zakho Ozithandayo
I-Gamepron ikulungele ukukusebenzela ngokusemandleni ethu, kungakhathalekile ukuthi yimuphi umdlalo obheke ukuwavikela. Sinikeza ukukopela kwemidlalo enhlobonhlobo, yonke eyenzelwe ukukusiza ukuthi uzuze okuningi - ukuthi ukuwina kanjani leyo midlalo kukuwe! Ngenketho enkulu kangaka yezinketho ze-hack ongakhetha kuzo, uzozizwa njengengane esitolo sikaswidi lapho uthenga ama-hacks nge-Gamepron. Noma ngabe i-Fortnite, i-Overwatch, i-Warzone, noma okunye ukukhishwa okudumile, sinakho ukukopela okufunayo!
UFortnite ubelokhu ekhona iminyaka embalwa, kepha izinga lokuthandwa kwalo mdlalo wezemidlalo lisamangalisa. Ungathola ukufinyelela kuwo wonke ama-Fortnite Hacks amahle kakhulu lapha e-Gamepron - noma ngabe yi-Aimbot ngokunemba okuphezulu noma isici sezexwayiso sokukugcina uqaphele, sinakho konke.
I-PUBG ingakucindezela uma imibuthano embalwa edlule iqhamuka, kepha ukusebenzisa i-PUBG Hack yethu kuzokuvumela ukuthi uqede umdlalo ngaphandle kwengcindezi (futhi ngokuwina!). Ukunemba nokubona indawo yesitha sakho kubalulekile ku-PUBG, futhi iPUBG Hack yethu ikuvumela ukuthi ukwenze ngokunembile lokho.
I-PUBG Lite inguqulo yeselula ye-PUBG nesihloko abaningi abathuthukisi be-hack abakhohlwa ngisho nokukucabanga ngokukhishwa kwabo. Asigcini ngokukuvumela ukuthi ungene ku-PUBG Lite, kepha wonke ama-HUB wethu we-PUBG Lite abhalwe ngekhwalithi engqondweni.
I-Apex Legends ingaba mnandi kubo bobabili abadlali beSolo ne-Squad, kepha ukusebenzisa i-Apex Legends hack yethu kuzokuvumela ukuthi uchume ngaphandle kwesimo. Akunandaba ukuthi ulahla kuphi, yiziphi izikhali onazo, noma ukuthi usebenzisa muphi umlingiswa - ukunqoba kuzofika kalula lapha.
Uthingo 6 Lokuvinjezelwa Hacks
I-Rainbow Six Siege kaTom Clancy kusengumdlalo ophelele wabadlali abancintisanayo emhlabeni wonke, futhi lokho kusho ukuthi uzofuna ukusebenzisa i-RB6 Hack yethu ukuqinisekisa ukuthi uhambisana nesixuku. Noma ngabe uhlela ukudlala i-Ranked noma i-Public, i-Gamepron ingakusa ezingeni elilandelayo!
Emdlalweni wokusinda njengoRust, noma yini ingenzeka - yingakho ukusebenzisa iRust Hack yethu kuyindlela elula yokuqinisekisa impumelelo yakho. Abantu bazohlala benza noma yini abangayenza ukuze baqhubekele phambili kuRust, futhi kwesinye isikhathi kufanele unikeze amandla ukugqwala kweRust bese ufuna ukuziphindiselela.
Ukuba ngumdlalo omusha kusho ukuthi abahlinzeki abaningi be-hack abakawaqedi amathuluzi abo we-Valorant, kepha hhayi i-Gamepron! I-Valorant Hack yethu efakwe ngokuphelele iyatholakala kunoma ngubani nakuwo wonke umuntu oyidingayo, kungakhathalekile ukuthi unaliphi izinga lekhono. Zizwe ukuthi kunjani ukuphumelela esimweni esinjalo sokuncintisana!
UTom Clancy's The Division 2 ngesinye isihloko esimangalisayo esikuvumela ukuthi wehle ngomkhondo kaTom Clancy ngendlela ehlukile. Kungumdubuli womuntu wesithathu ogcwele izitha ze-AI ezinamandla amakhulu nabadlali bempilo yangempela ngokufanayo. Sebenzisa iDivision 2 Hack yethu ukuhlala phambili komncintiswano futhi uchume.
Abaningi bethu bayakhohlwa ukuthi kunjani ukwehluleka emidlalweni yevidiyo, kuze kube yilapho kuqhamuka i-Escape from Tarkov. Uma ufuna ama-EFT Hacks ongethembela ukuthi uzokugcina uphephile phakathi kwalezo zigameko eziyingozi, i-Gamepron inazo zonke izici ozidingayo ukuphanga nokuzidubula kalula.
Busa njengoba ubungenza kunoma yisiphi esinye isihloko seCall of Duty usebenzisa ama-hacks ethu amangalisayo we-COD Black Ops Cold War! Ngamathuluzi we-Gamepron nakanjani uzophumelela, ngaphandle kwekhono lakho. Sibeka amandla ngqo ezandleni zabasebenzisi bethu lapha eGamePron.
Ama-Hacks Wethu Esimanjemanje azokuvumela uchume noma ngabe udlala yiphi imodi, ngoba izitha zakho ngeke ziphephe olakeni lwakho. Ungavumela i-Modern Warfare Aimbot (equkethe i-Instant Kill) ukuze iqinisekise ukuthi uma ufuna umuntu afe, kuyenzeka - akukho mibuzo ebuziwe!
ICall of Duty: I-Warzone Hacks ayinzima kangako ukuyithola, kodwa yinye yalesi silinganiso? Lokho kungatholakala lapha lapha eGamepron. Uma ulindele okuningi ku-Warzone Hack yakho futhi ufuna izici eziningi zingenzeka, sinethuluzi lakho lokugcina lonke-elilodwa lakho!
I-Overwatch isaqhubeka nokuqina ngisho nangemva kwayo yonke le minyaka, okuyinto enhle. Njengoba abantu abaningi beyidlala namanje, kumane nje kusho ukuthi kuzobe kunenqwaba yezinqola ezivuthiwe ekukhetheni - sebenzisa iHackwatch Hack yethu kanye nenqubekela phambili emidlalweni ebekiwe neyomphakathi ngokuxhamazela.
Ufuna ukuphakamisa amazinga akho e-adrenaline futhi wenze inhliziyo yakho ishaye? Uma unikwe amandla ama-DBD Hacks ethu, wonke umdlalo uzobonakala njengokuhamba okuphumuzayo epaki. Juke indlela yakho yokuwina njengoMsindisi, noma ushaye ngokunemba njengoMbulali.
Abanye bathe i-Last Oasis ifana nokuhlanganiswa phakathi kwe-ARK ne-Rust, okunengqondo ukuthi kungani abantu abaningi benesithakazelo kuyo. Uma ufuna ukuphumelela kulo mdlalo omusha sha, indlela elula yokwenza lokho ukusebenzisa ama-Oasis hacks ethu.
Futhi omunye umdlalo wokusinda, i-Deadside izovivinya amakhono akho wokudlala kuzo zonke izici ezinokwenzeka. Uma kwake kwaba nokugenca kwe-Deadside okuvumela abaqalayo ukuthi bazuze kwasekuqaleni, i-Gamepron ibhekele ukukuletha emphakathini. Awutholi ukufinyelela kumathuluzi we-lackluster lapha, kuphela izinto ezinhle.
I-Battlefield 5 ngumdlalo omkhulu ohamba kuwo wonke amamephu amakhulu kuwo wonke umdlalo, ongacasula kwesinye isikhathi. Yize lokhu kuliqiniso, ukusebenzisa ama-BF5 Hacks ethu kuzokwenza ukuvikeleka kokubulala futhi kunqobe kube lula (kanye nokubekwa phambili kwakho phezulu!). Zizwe amandla ngawo wonke ama-hacks wethu we-Battlefield 5!
I-Counter-Strike: I-Global Offensive ibe yisisekelo esidlangalaleni emphakathini wezokudlala, yingakho sisakha iqembu lezentuthuko. Umdlalo usachuma, futhi ama-CSGO Hacks ethu azokusiza ukuthi uphumelele futhi! Musa ukubeka imali yakho kumathuluzi okuswela okungenzeka ukuthi akuvele uvinjelwe, ikakhulukazi lapho ungavele uthembele ku-GamePron ukwenza umsebenzi wenziwe kahle.
Ufuna i-Hyper Scape Aimbot ethembekile? IHyper Scape Hacks yethu izokunikeza i-Aimbot ephezulu, kanye nezinye izici eziningi ezizokwenza ukuwina kube ngumsebenzi olula. Ungabe usazabalaza, njengoba ithuluzi lethu lilapha ukusiza. Ungawanqoba wonke amaqembu uwedwa ngamathuluzi wethu enziwe asebenza.
I-Anarea Battle Royale ngumdlalo odumile onamasosha amaningi anekhono ngaphakathi, kepha kuthiwani uma ungabanqoba bonke ngasikhathi sinye? Sebenzisa i-Anarea Blue Hack yethu kuzokuvumela ukuthi ukufeze ngqo lokho, futhi kutholakala kuphela lapha eGamePron. Thola ukuthi ungabhubhisa kanjani abaphikisi bakho usebenzisa i-GamePron!
Sebenzisa iHack Coco Hack yethu ukufeza ukuphakama okusha phakathi kwethu! Abantu ngeke bakwazi ukukumisa uma usugingqika, ikakhulukazi uma unikwe zonke izici ezikhethekile ezinikwe amandla (ezitholakala lapha kuphela ku-GamePron). Phakathi kwethu kungabonakala njengomdlalo omnandi ukudlala nabangani bakho, kepha izinto zingaba zimbi kwesinye isikhathi. Akukaze kubuhlungu ukuba phakathi kwethu i-Coco ukubuyela emuva lapho izikhathi ziba nzima!
IDayZ izokujikijela kakhulu, okungabonakala kukhungathekisa kubadlali abasha. Noma ngabe umusha kulo mdlalo noma udinga nje “umfutho” omncane, ungathembela kuma-DayZ Hacks ethu ukuletha! Thola usizo oludingayo ku-GamePron. Onke amathuluzi ethu enzelwe ukuhlala engabonakali ngesikhathi sokusetshenziswa, ngakho-ke awusoze wakhathazeka ngokuvinjelwa. Ukuphepha kuyinto eza kuqala lapho ukhetha ukugenca nge-GamePron!
Uma uncintisana ngokweqile futhi ufuna ukuwina kuwo wonke umdlalo owudlalayo, ukusebenzisa ama-Fall Guys Hacks ethu kuzokusa kude. Ungathembela ku-GamePron ukunikela ngazo zonke izici eziphumelela kakhulu kuma-Fall Guys Hacks, kanye nezinketho ezingeziwe. Ufanele ukuqoqa imiqhele eminingi ngendlela ongathanda ngayo! Ukusebenzisa ama-Fall Guys Hacks ethu kuzokuvumela ukuthi uwine yonke imijaho, futhi ugweme ukuqedwa kalula.
I-Hell Let Loose ngumdlalo ovumela ukuthi kugxilwe ezingeni elithile, futhi uma untula lokho, ungahle ungabi nempumelelo enkulu. Ngokujabulisayo, ungasebenzisa i-Hell Let Loose Hacks yethu ukuthola isandla esiphakeme kuzo zonke izimpi zakho! Kuningi ongakufeza kulo mdlalo, kanye nama-engeli amaningi ahlukahlukene izitha zakho ezingahlasela kuwo. Thola ukuzethemba okudingayo ukuze uphumelele futhi uthenge ukhiye womkhiqizo we-Hell Let Loose Hacks yethu namuhla.
Ukulingisa kungaba nzima ukukufeza kwabanye, futhi kunezikhathi lapho ama-hacks asuselwa kuselula ukubheja kwakho okuhle kakhulu. Ukusebenzisa i-PUBG Mobile Inception Android Hack kuzokuvumela ukuthi uphumelele yize ungalingisi! Ngezici ezinhle njengePUBG Mobile Aimbot, iWallhack, i-ESP, nezinye eziningi, azikho ezinye izindlela ezingafana nekhwalithi yeGamePron. Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla bese ugenca ngomhlinzeki ongcono kunabo bonke online!
Usebenzisa ama-hacks wethu we-PUBG Mobile Emulator kukunika ukufinyelela kuzici ongakaze ucabange ukuthi zingenzeka ngenkathi udlala iPUBG Mobile. Ungasebenzisa i-stellar Aimbot ezokwehlisa izitha ngejubane, noma iRadar ekugcina uqaphile! Bobabili abaduni abanolwazi nabasanda kuqala bangazuza kumathuluzi ethu, konke okumele ukwenze ukuthenga ukhiye womkhiqizo futhi ungalanda ama-hacks we-PUBG Mobile Emulator khona manjalo.
Yize umdlalo musha, akukho okuhlukile ngemiphumela esiyinikeza lapha eGamePron. Ngokunikeza abasebenzisi bethu ukufinyelela kumathuluzi amahle kakhulu, sihlala sibabeka esimweni lapho bengaphumelela khona! Akunandaba ukuthi usunesikhathi esingakanani ugenca noma udlala imidlalo, ukusebenzisa i-Rogue Company Hacks yakho kuzokusiza uchume ngezindlela eziningi. Zizame wena!
I-Spellbreak ngumdlalo ophelele kunoma ngubani othanda umhlaba omnandi. Ungaba umthakathi oyinhloko noma i-warlock, kumane nje kuyindaba yokuyigaya - noma ungavele usebenzise amaSpellbreak Hacks ethu! Ungadlali nganoma yisiphi isikhathi sakho noma imali kokunye ukukopela kwe-Spellbreak. I-GamePron ingumhlinzeki we- # 1 wawo wonke ama-Spellbreak hacks online, futhi lokho kungenxa yekhwalithi etholakala kuwo wonke amathuluzi ethu. Thola umuzwa omuhle kakhulu khona lapha!
Kunokuhlukahluka okuningi okuya empumelelweni ngesikhathi sokuzidela kwakho kwe-Squad, futhi ukusebenzisa ama-Squad Hacks ethu kuzokhawulela izinkinga ohlangabezana nazo. Noma ngabe amaZombi noma abadlali bangempela, ukusebenzisa ithuluzi lethu kuzokugcina uvikelekile. Thola izinto ezihamba phambili usebenzisa i-Squad ESP hack yethu, noma vele ukhiphe abaphikisi bakho ngokuxhamazela ngokunika amandla i-Squad Aimbot yethu ethembekile. I-GamePron inakho konke okudingayo!
Yize kunamanye amathuluzi amaningi emakethe athi azokuguqula ube yinkosi yeWarface, ambalwa kakhulu kuwo azosebenza njengale. Sebenzisa i-Warface GamePron hack ukuze uthole onqenqemeni kumphikisi wakho kunoma yisiphi isimo, noma ngabe banamakhono kangakanani! Abanye abadlali bazokweqa ukusebenzisa ama-hacks ngoba bakhathazekile ngokuvinjelwa, kepha lokho akunakwenzeka lapha. Konke ukukopela kwethu kungu-100% okungatholakali ukugcina abasebenzisi beGamePron bephephile.
Noma ngabe ufuna ukuba lusizi noma ubheke nje ukugwema ukubhekana ngeziqu zamehlo, ungasebenzisa i-GTA 5 Exclusive Hack yethu ukuphatha izinto. Dubula ngokunemba okungu-100% noma ukhiphe noma iyiphi imoto ongathanda ukuyisebenzisa ngaleli thuluzi elimsulwa! Uma ugula futhi ukhathele ukungena ku- “Passive Mode” futhi ufuna ukudlala umdlalo, lwa nomlilo ngokunika amandla i-GTA 5 Exclusive Hack yethu!
I-GamePron isungule enye yama-Paladins Hacks anokwethenjelwa kakhulu atholakala kuwebhu, enika abasebenzisi bethu ukufinyelela kwezinye zezici ezinamandla kakhulu ezitholakala ekukhohlisweni kwePaladins. Ufanelwe umuzwa ongcono wokudlala! Ukulungiselela ubusuku obulahlekile ePaladins akuseyona itimu, ikakhulukazi uma uthola ukufinyelela isikhathi eside. Thenga ngokwakho ukhiye womkhiqizo namuhla bese uhlangabezana nama-hacks abushelelezi azungeze!
IRing of Elysium ngomunye umdlalo omusha othatha i-gameplay eku-inthanethi ukuyenza ibe banzi imidwebo, kepha ungajabulela umdlalo omningi ngaphandle kwama-ROE Cheats afanele. Usebenzisa i-ROE GamePron hacks kuzokunika ukufinyelela kwezinye zezici ezinamandla kakhulu ezake zatholakala kuthuluzi! I-GamePron inikezelwe ekwakhiweni kwama-hacks asezingeni eliphakeme isikhathi esithile, futhi ngeke sishintshe ithoni yethu noma kunini - uma ufuna imiphumela, usendaweni efanele.
Ukuzingela: Umbukiso uzokuvivinya (nabangane bakho uma kufanele!) Ngezindlela eziningi, ngoba akuwona amaqembu aphikisayo kuphela okufanele uwabheke. Khipha zombili izilo nabanye abadlali ngaphandle kokukhathazeka usebenzisa iHunt yethu: iHowdown hack!
Umbhikisho: ISandstorm izohlala ibhekela abalandeli abanzima bemidlalo yokudubula, kepha ungaya ngaphezulu nangaphezulu nge-Insurgency yethu: Sandstorm hacks!
Uthola kangaki ithuluzi elizokuguqula libe ngumshini wokuwina ongami? I-GamePron inempumelelo yabasebenzisi bethu kuphela engqondweni, ngakho-ke uma ufuna imiphumela, ukusebenzisa uLwandle Lwamasela wethu okuwukuphela kwendlela kuphela. AmaGamers agulayo futhi akhathele ukubhujiswa ku-inthanethi akusadingeki abhekane nakho, njengoba uLwandle lwethu lwamasela Hacks luzoshintsha izinto zibe ngcono.
Ama-ARMA 3 hacks akulula ukuhlangana nawo kulezi zinsuku, njengoba iningi lonjiniyela sebelithathile kakade ukuthuthela kwamanye amaphrojekthi. Asigcini nje ngokuba ne-ARMA 3 Aimbot ne-ARMA 3 ESP / Wall Hack engcono kakhulu, kepha kukhona nezinye izici eziningi okufanele uzicabangele lapho ukopela ngeGamepron.
Noma ngabe kuyinjongo yakho noma indawo yezitha, ungasebenzisa ama-RDR2 Hacks ethu ukuthola inzuzo kunoma yisiphi isimo. Kuhle ngaso sonke isikhathi ukufunda kabanzi mayelana nendawo okuyo, ngoba lokho kuzokusiza ukuthi uwine. Noma uyi-novice uma kuziwa kuma-hacks ungazuza kumathuluzi ethu. Zonke zilula futhi ziqondile, zinika ngisho isigenge “esiluhlaza” kakhulu ithuba lokulwa online! Singumhlinzeki we- # 1 we-RDR2 Hacks ngesizathu.
Lungiselela izimpi ezinkulu namabalazwe amasha ku-Battlefield 2042 ngokuthola ukufinyelela ku-hack yethu ye-Battlefield 2042 GamePron. Nge-stellar Battlefield 2042 aimbot, wallhack, ne-ESP yakho, ukuwina ukufana okuningi kuyisiqinisekiso.
I-COD Vanguard Hacks
I-COD Vanguard Hacks yethu izokuvumela ukuthi uchume kungakhathaliseki ukuthi udlala yiphi imodi yomdlalo, njengoba izitha zakho ngeke ziphephe olakeni lwakho. Ungakwazi ukunika amandla i-COD Vanguard Aimbot (efaka i-Instant Kill) ukuze uqinisekise ukuthi uma ufuna ukufa othile, kuyenzeka - akukho mibuzo ebuzwayo!
"I-Gamepron inikeza ukukopela okungabonakali okungu-100%, okuyikho konke engikufunayo."
Ngabe i-PC Hacks & Cheats yethu isebenza kanjani?
Sidayisa okhiye bomkhiqizo lapha eGamepron, engasetshenziselwa ukufinyelela kuwo wonke ama-hacks amahle esiwakhile. Lapho ithuluzi selikhishiwe, sinikela ngenani elilinganiselwe lama-slots kubasebenzisi bethu - eza kuqala, qala ukhonze, ngakho-ke uzofuna ukwenza ngokushesha.
Isixazululo Sokugcina Sokugenca
Onke ama-hacks ethu yisixazululo sokugcina sokukodwa, kungakhathalekile ukuthi yimuphi umdlalo ofuna ukukhohlisa kuwo. Uma ucabanga ikhwalithi nenombolo yezici ezikhona, kunzima ukusho ukuthi kukhona enye indlela engcono laphaya. Uma ufuna imiphumela, i-Gamepron ukuphela kwegama ongalethemba.
Noma yikuphi ukukhetha umdlalo okuningi kokugenca
Sinokukhethwa okukhulu kwama-hacks lapha eGamepron ahlanganisa imidlalo ehlukahlukene, enikeza abasebenzisi bethu ukufinyelela kukhathalogi eguquguqukayo kunazo zonke yezikhohlisi kwi-intanethi. Sinama-hacks amaningi emidlalweni eminingi ehlukene, ngakho-ke ukukhetha kungokwakho!
Khokha kuphela isikhathi osidingayo nsuku zonke, isonto noma inyanga nenyanga
Awudingi ukukhokha ngokweqile uma ungahleleli ukusebenzisa ama-hacks isikhathi eside, njengoba sinikeza okhiye bomkhiqizo abasebenza nsuku zonke, masonto onke, noma ngenyanga. Sinezikhala zesikhathi sokulingana nezidingo zawo wonke umuntu lapha eGamepron.
Khetha umdlalo ofuna ukuwudlala! Khetha ekukhetheni okubanzi kwezihloko esizimboze lapha eGamepron bese ubusa abaphikisi bakho ngaphandle kokusebenza kanzima.
Khetha ukugembula okulingana nokudingayo
Sinikeza izinketho eziningi uma kukhulunywa ngokuthi yikuphi okukufunayo okuthandayo - mane ukhethe ukukopela okudingayo bese uqhubeka nokukhokha
Zonke izinkokhelo ezithathwe lapha eGamepron ziphathwa kusetshenziswa iprosesa yethu yokukhokha ekhethekile ukuqinisekisa ukuphepha kolwazi lwamakhasimende
Ngemuva kokuthola ukufinyelela kukhiye wakho womkhiqizo, ungayisebenzisa ukulanda ama-cheats ngokufanele. Senza inqubo yokulanda nokufaka ibe lula lapha eGamepron!
I-Gamepron ingumhlinzeki oholayo wama-hacks wegeyimu nokuphamba
Onke amathuluzi wethu aklanywe ngobunono ukuze kugcinwe abasebenzisi bethu bephambili, njengasekupheleni kosuku, ukhokhela inzuzo - kukithi ukuqinisekisa ukuthi ulawula wonke umdlalo owodwa!
Noma yimuphi umdlalo nabahlinzeki abaningi, i-hack njalo eku-inthanethi yomdlalo ngamunye ongakhetha kuwo
Akekho omunye umhlinzeki kuwebhu ozothatha amathuluzi akho ngokungathi sína njengoba senza lapha eGamepron. Akunandaba ukuthi yimuphi umdlalo owudinga ukukopela, sizohlala sinomhlinzeki onokwethenjelwa ukukunikeza ama-cheats anamandla aphezulu.
Isebenza kanjani i-Gamepron
Kungani usebenzisa i-aimbot, ukukopela noma ama-hacks
Ama-Hacks Wayo Yonke Imidlalo Oyithandayo!
Yonke imidlalo oyikhonzile ingagencwa, kumane nje kuyindaba yokuthola insiza efanelekile onokholo kuyo. Ubungeke uthande ukusebenzisa ama-hacks asezingeni eliphansi ku-akhawunti eyinhloko, ingasaphathwa eyoku-smurf account! Lokho kucishe kufane nokucela ukuvinjelwa ngenhloso, ngoba iningi lonjiniyela abakha ama-hacks kulezi zinsuku abanandaba nokuphepha kwabasebenzisi babo. Ngeke ukwazi ukuthenga ama-hacks kuphela kuzo zonke izihloko zakho ozithandayo, kepha uzokwazi futhi ukwenza kanjalo ngokuthula kwengqondo. I-Gamepron ayitholakali futhi izovumela ama-akhawunti akho athuthuke ngokushesha usebenzisa ama-hacks, kepha ikuvumela ukuthi wenze kanjalo ngaphandle kwayo yonke ingozi ehambisana nokukopela.
Noma ngabe ufuna ukungena ku-Rust, Overwatch, Escape kusuka eTarkov, noma esinye sezihloko ezimangazayo esizakhele ukukopela, i-Gamepron iyindawo efanelekile yazo zonke izidingo zakho zokugenca. Labo abadinga kakhulu izisombululo zokugenca bangagcina bathole ukuthula, njengoba i-Gamepron ilapha ukusindisa usuku!
Hlobo Luni Lwezici Ezihlanganisiwe?
Noma ngabe ungumlandeli wabadubuli bomuntu wokuqala, imidlalo yokusinda, noma yini ephakathi, i-Gamepron izoba namathuluzi athembekile obukade ukufuna sonke lesi sikhathi. Sinikeza ama-Aimbots, ama-ESP / ama-Wall Hacks, i-NoRecoil, nezinye izici eziningi ezimangazayo ngaphakathi kokukhohlisa kwethu - futhi lokho kuyisiqalo nje. Inani lezici ezikhona ngaphakathi kwamathuluzi ethu lingesinye sezizathu eziyinhloko zokuthi kungani abasebenzisi beqhubeka nokubuyela kokunye, njengoba besazi vele ukuthi i-Gamepron izobanikeza ukufinyelela kokukhohlisa okuhle online. Ngenkathi abanye abathuthukisi bematasa bezama ukusika amakhona futhi benze inzuzo nomaphi lapho bengakwazi khona, i-Gamepron izohlala ihlale igxile ekunikezeni amakhasimende ethu ngesixazululo esinokwethenjelwa.
Kungakhathaliseki ukuthi sithuthukise ukungena ngaphakathi endlini noma sasebenza nomunye wozakwethu abaningi abahloniphekile, wonke ama-hacks owasebenzisayo avela ku-Gamepron azofaka izici okungenzeka ukuthi awuzange uzibone esikhathini esedlule. Ngokuthandwa kwezinyawo, ukulimala okuphezulu, nebanga, bambalwa abantu kule planethi abazohambisana nejubane lakho!
Kungani Ngingayidinga I-Aimbot?
Iningi lemidlalo lizoklomelisa umdlali onekhono ngokwengeziwe, futhi akukho okuningi ongakwenza ngalokho - yingakho ubona abasakazi kanye nabadlali abangochwepheshe bezilolonga ngokusemandleni abo. Lapho ungeke ukwazi ukuchitha amahora phambi kwekhompyutha yakho noma umane wenqaba ukwenza kanjalo, ungavele uthembele ku-Gamepron ukuthi ibe ne-Aimbot ephelele yezidingo zakho. Noma ngabe ufuna i-EFT Aimbot, i-Modern Warfare Aimbot (noma iWarzone Aimbot!), Noma i-EFT Aimbot, i-Gamepron ukuphela komhlinzeki ongakugcina ubusa ngokuphepha.
Ama-Aimbots ethu eza nezinto eziningi kunezindlela eziningi, njengoba uzokwazi ukusebenzisa okuthandwa yi-Instant Kill ne-Bone Prioritization. Ama-Aimbots wonke afakwe i-Auto-Aim / Fire, futhi isici se-Smooth Aiming sivumela ukubulala kwakho kubonakale kungokwemvelo kakhulu. Uma ufuna ukukopela ngobuqili, kepha usafuna amandla okucisha umlilo eza nokusebenzisa i-Aimbot, iGamepron inesixazululo esifanelekile. Inhloso embi ngeke iphinde ikubulale!
Thenga Wonke amaHacks Wakho Namuhla!
Ungathenga ukufinyelela kuwo wonke ama-hacks owake wawafuna lapha eGamepron, kumane nje kuyindaba yokwenza kuwo. Ukuthi uke wakopela esikhathini esedlule akunandaba, ngoba nabadlali be-novice kakhulu emhlabeni bangasebenzisa ama-hacks ethu. Senze inqubo yokulanda nokufaka ibe lula ukuqinisekisa ukuthi ama-hacks azolungela ukuya ngokushesha okukhulu. Ngezinhlobonhlobo zemidlalo nama-hacks ongakhetha kuwo, umuntu angaphikisa ngokuthi i-Gamepron ingumhlinzeki we-hack ohamba phambili kakhulu okwamanje!
Inkokhelo yakho izophathwa yiprosesa yethu yokukhokha ekhethekile ukuqinisekisa ukuthi alukho ulwazi lwakho lomuntu siqu olusengcupheni yokudalulwa, nolunye ungqimba lwezokuphepha esizinike isikhathi sokulufaka lapha eGamepron. Ungathenga okhiye abaningi bomkhiqizo ngendlela ongathanda ngayo, inqobo nje uma izikhala zivulekile nesikhathi osifunayo usatholakala. Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla bese uqala!
Phumelela. Njalo. Umdlalo.
The Power Ukunqoba Yonke Imidlalo ngama-Gamepron Hacks & Cheats